Igwe na-agba ọkụ & Ụlọ ọrụ mapụtara, ndị na-ebunye - igwe na-agba ọkụ China & ndị na-emepụta akụkụ ahụ mapụtara
In Drum ụdị ogbugba ogbugba igweA na-agbawa obere iberibe ọrụ dị ka nnukwu ngwongwo.Ya mere enwere ike iji ha na ahịrị mmepụta ma ọ bụ maka nhazi nke naanị ya.
A na-anabata imewe mgbawa ahụ dị ka otu n'ime usoro mgbawa kacha dị irè maka iwepụ ọnụ ọgụgụ, nchara na burrs site na akụkụ mmepụta oke.Nkeigwe gbawara agbawaeriri rọba na-adịghị agwụ agwụ na-eji nwayọọ na-atụgharị akụkụ ọrụ ahụ wee kpughee ha n'otu oge na iyi na-ekpo ọkụ maka oge mgbawa niile.
Igwe mgbawa ụgbọ okporo ígwè dị n'eludị mma maka ọtụtụ ngwa ngwa.A na-eji aka kwụchie akụkụ ọrụ ndị ahụ ma ọ bụ tinye ya.Enwere ike ịme usoro ịgbawa ọkụ n'ụzọ dị mma site n'ịgbanwe ntụgharị ntụgharị na site na myogharị nke hangers n'ihu turbines.
Enwere ike itinye ebutu ozugbo n'ime akpa dị iche iche ma ọ bụ n'elu eriri mbufe.Igwe ihe na-agbawa agbawa RollerA na-eji wetuo ma mebie profaịlụ, mpempe akwụkwọ na ihe ndị e chepụtara echepụta.N'iji ndị na-ebufe obe, enwere ike ijikọ sistemu ihe na-ebufe igwe na usoro usoro nke onye ọ bụla, dị ka ịgbawa ọkụ, nchekwa, ịwa ihe na mkpọpu mmiri.
Nkemgbawa wiiltumadi mejupụtaraụlọ na-achịkwa, agụba, efere nchebe, ogwe isi, iti ihe na-agba ọsọ dị elu, wiil belt, eriri eriri, ihe na-emesi ike, na motoyanaisi enginewdg.
Hanger ụdị ogbugba ogbugba igweso n'ụdị akụrụngwa mgbawa kacha agbanwe agbanwe.A na-eji ha wepụ nchara, ọnụ ọgụgụ, ájá na burrs n'ọtụtụ ụdị ọrụ.Hanger ụdị ogbugba ogbugba igweA na-ejikwa ya emecha ihe mgbawa nke iberibe ọrụ nwere mmetụta ma ọ bụ mebie akụkụ ọrụ maka mkpuchi na-esote.